किबी खेतीप्रति कृषक आकर्षित, एउटै कृषकको वार्षिक आम्दानी २१ लाखसम्म - Halesi Khabar
किबी खेतीप्रति कृषक आकर्षित, एउटै कृषकको वार्षिक आम्दानी २१ लाखसम्म
२ मंसिर २०७६, सोमबार १३:१८ ।
खोटाङ, २ मङ्सिर । पछिल्लो समय जिल्लाका कृषकहरु व्यवसायिक किबी खेतीप्रति आकर्षित बन्दै गएका छन् । बजारमा उपभोक्ताको बढ्दो माग र कम मेहनतमै प्रयाप्त उत्पादन हुने भएपछि जिल्लाका कृषकहरु व्यवसायिक किबी खेतीप्रति आकर्षित बन्दै गएका हुन् ।
वि.सं. २०६८ सालबाट किबीको व्यवसायिक खेती शुरु गरिएको जिल्लामा अहिले अधिकांश क्षेत्रका कृषकले आ–आफ्नो क्षेत्रमा व्यवसायिक खेती शुरु गरेका छन् । लामो समय विदेश बसेका तथा गाउँमा बेरोजगार बसेका युवाहरु आफ्नो खाली रहेको जग्गा तथा भाडामा लिएर व्यवसायिक किबी खेती गर्नेको लहर नै चलेको छ ।
दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा केपिलासगढी गाउँपालिका–१ फेदीका युवा कृषक धनकुमार राईले जिल्लामै पहिलोपटक किबीको व्यवसायिक खेती शुरु गर्नुभएको थियो । पहिलो वर्ष ४३३ केजी किबी उत्पादन गर्नुभएको युवा कृषक राईले यस वर्ष दुई हजार १०० केजी उत्पादन गर्नुभएको छ ।
रोपेको करीब चार÷पाँच वर्षमा मात्र फल दिने किबीले राईले लगाउनुभएको बगानमा तीन वर्षमै उत्पादन दिन थालेको थियो । राईले उत्पादन गर्नुभएको किबी प्रति केजी रु २०० देखि रु ३०० सम्ममा घरैबाट बिक्री भइरहेको छ ।
एउटै बोटबाट निरन्तर ५० वर्षसम्म उत्पादन दिने किबीको बिरुवा समेत राई आफैले उत्पादन गरेर बिक्री गर्दै आउनुभएको छ । किबीको बिरुवा बिक्रीबाट मात्रै वार्षिक रु १५ लाख बढी आम्दानी हुने गरेको कृषक राईले बताउनुभयो ।
राईले उत्पादन गर्नुभएको बिरुवा प्रतिगोटा रु ३०० मा घरबाटै बिक्री हुने गरेको जनाइएको छ । जिल्लामा किबीको व्यवसायिक खेती शुरु गर्ने कृषकको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएकाले माग अनुसार बिरुवा उत्पादन गर्न गाह्रो भएको राईको भनाइ छ ।
वि.सं. २०६७ साल माघमा दश रोपनी जग्गामा १२५ बोट बिरुवा रोपेर व्यवसायिक खेती शुरु गर्नुभएको कृषक राईले यस वर्ष मात्रै रु २१ लाख ६० हजार आम्दानी गर्नुभएको छ । रहरै रहरमा किबी खेती शुरु गर्नुभएका राईका लागि अहिले किबीको फल तथा बिरुवा नै आम्दानीको आकर्षक माध्यम बनेको छ ।
एउटा वयष्क किबीको बोटमा १०० देखि १५० केजीसम्म फल उत्पादन हुने गरेको युवा कृषक राईले बताउनुभयो । “बजार मूल्यमा अन्य फलफूलभन्दा किबी धेरै महङ्गो छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “आफूले उत्पादन गरेको किबी बजार पु¥याएपछि चाख्नकै लागि भएपनि उपभोक्ताले खरिद गर्ने गरेका छन् ।”
धनकुमार जस्तै दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–७ का शुभचन्द्र राईले किबीको बिरुवा बिक्री गरेर लोभलाग्दो आम्दानी गरिरहनुभएको छ । बिगत पाँच वर्षदेखि किबीको निरन्तर नर्सरी उत्पादन गर्दै आउनुभएका राईले वार्षिक रुपमा रु छ लाख भन्दा बढी आम्दानी गर्दै आउनुभएको छ ।
जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेलबजार नजिक पर्ने नेर्पाको तालखर्कमा २० रोपनी जग्गामा किबी खेती लगाउनुभएका राईले उत्पादन गर्नुभएको किबीको बिरुवा प्रतिगोटा रु ३५० मा बिक्री गर्दै आउनुभएको छ । कानूनमा बिएल तथा समाज शास्त्र र राजनीतिक शास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएका राईले यस वर्ष गोल्डेन, हेवार्ड र रेड प्रजातिका बिरुवा उत्पादन गर्दै आउनुभएको छ ।
चार वर्ष अगाडि वि.सं. २०७२ साल माघमा ४० रोपनी जग्गामा ३५० बोट किबीको बिरुवा रोप्नुभएका दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–२ का दोर्जी शेर्पाले पहिलो वर्ष नै दुई हजार २०० केजी उत्पादन गर्नुभएको छ । शेर्पाले उत्पादन गर्नुभएको किबी दिक्तेलबजार, हलेसी र काठमाडौँमा बिक्री भइरहेको जनाइएको छ ।
कलमी बिरुवा रोपिएको किबीले उत्पादन दिन थालेको पहिलो वर्ष नै रु छ लाख ६० हजार भन्दा बढी आम्दानी भएको शेर्पाले बताउनुभयो । “किबी खेतीलाई अन्य बाली जस्तो दैनिक रुपमा हेरचाह गरिरहनुपर्दैन रहेछ !”, उहाँले भन्नुभयो, “कम मेहनतमा बढी आम्दानी दिने हुँदा यस वर्ष थप विस्तार गर्ने तयारीमा लागेको छु ।”
छ देखि आठ मीटरको दूरीमा रोपिने किबीलाई अन्य बालीनालीलाई भन्दा कम मेहनत गर्दा पनि प्रयाप्त उत्पादन दिने र किबी खेती गरिएको क्षेत्रभित्र अन्य बालीनाली लगाएर दोहोरो फाइदा लिनसमेत सकिने कृषकहरुले बताएका छन् । समुद्री सतहबाट दुई हजार ५०० मीटरमाथि अर्थात् सुन्तला फल्ने क्षेत्र भन्दामाथि र स्याउ फल्ने क्षेत्रभन्दा तल्लो क्षेत्रमा किबी खेती गर्न उपयुक्त भूगोल मानिन्छ ।
ब्रुनो र मन्टी प्रजातिको किबी समेत उत्पादन हुँदै आएको जिल्लामा सबैभन्दा बढी हेवार्ड र रेड प्रजातिको किबीको राम्रो सम्भावना रहेको कृषि विज्ञहरुले बताएका छन् । किबीलाई प्रशस्त पानीको श्रोत र चिस्यान भएको ठाउँ उपयुक्त हुन्छ ।